တရုတ် PET စုတ်တံ အမျှင်ထုတ်စက် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
PET စုတ်တံအမျှင်များပြုလုပ်သည့်စက်ကို စုတ်တံဖိုက်ဘာထုတ်စက်၊ စုတ်တံအမွေးအမှင်စက်၊ စုတ်တံ ချည်မျှင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း စသည်တို့ကိုလည်း လူသိများသည်။ ဤစက်လိုင်းသည် ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် PET monofilament၊ ဖုန်မှုန့်၊ အဝတ်သန့်ဆေးဖြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဘရက်ရှပ်၊ comber brush တို့ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၊ WC စုတ်တံ စသည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် အမျှင်များထုတ်လုပ်ရန် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်လိုင်းအား တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဖောက်သည်များက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
မတူညီသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက် PET စုတ်တံအမျှင်ထုတ်စက်ကို အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း ပေးဆောင်ပါသည်။
1. 100% ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော PET ပုလင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် ကုန်ကြမ်းအမှုန်အမွှားများကို ထုတ်ပေးသည်။
3. အရည်အသွေးမြင့် စုတ်တံအမျှင်များကို သေချာစေရန် အဆင့်မြင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု။
4. ပြီးပြည့်စုံသော လည်ပတ်မှုလက်စွဲကို အောင်မြင်သော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
5. သင့်အား စိတ်ချမ်းသာစေမည့် တစ်ခုတည်းသော ဝန်ဆောင်မှု။
>> PET စုတ်တံအမျှင်များပြုလုပ်သည့်စက်
ယခင်- ဓာတုဆံပင်အတွက် China Pet Synthetic Fiber/Mono Filament/Bristle/Hair Machine အတွက် OEM စက်ရုံ
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံစျေးနှုန်း တရုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်/PP/PVC Synthetic ဆံပင်တုဆံပင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်